४० वर्षीया ‘आमा’ जुन पुनमगरको ४७ छोराछोरी, पढौं मर्मस्पर्शी कथा | Everest Times UK
त्यसो भए ४७ जना छोराछोरीको पालनपोषण र शिक्षादीक्षाका लागि एउटी आमाले कसरी धानेकी होलिन् ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । ‘जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय’ भन्ने प्रचलित उखानझैं मगरले वास्तविक आमा हुनुको सुख–दुःख झेलेकी छन् । ‘कसैले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर संस्थाको नाममा पैसा पठाइदिन्छन्,’ उनले खुसी व्यक्त गरिन्, ‘दुई हजार पाँच सयको केक र त्यति नै रुपैयाँबराबरको मासु किन्छौं । उत्सव मनाउँदै खुसियाली साट्छौं । जन्मोत्सव मनाउन प्राप्त केही रुपैयाँ बचाउन सक्यौं भने एउटा खाना पकाउने ग्यास वा एक बोरा चामल किन्छौं ।’
सहृदयी मनकारीको सहयोगले ४७ जना बालबालिकाले जीवन पाइरहेका छन् । जीवनको गोरेटो पहिल्याउन लागिपरेका छन् । द्वन्द्वपीडित, भूकम्पपीडित र अभिभावकविहीन बालबालिकालाई वास्तविक जीवनपथमा डोर्याउन पटक्कै सजिलो छैन । ‘कहिलेकाहीं असाध्यै गाह्रो हुन्छ । तपाईंसँग कुराकानी (२०७६ पुस २५ गते) गरिरहँदा चामल सकिँदै गएको छ,’ समाजसेवी मगरले नलुकाई भनिन्, ‘म आत्तिएकी छैन । मलाई विश्वास छ, मनकारी सहयोगी भेटिनेछन् ।’
रोल्पा, रुकुम, मुगु, कैलाली, हुम्लालगायत १२ जिल्लाका बालबालिकालाई आश्रय दिएको संस्थाले २८ छोरा र १८ छोरीको पालनपोषणमात्रै होइन, शिक्षादीक्षा दिँदै आएको छ । संस्थामा द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको बाहुल्य छ । त्यसो हुनुको कथा त्यत्तिकै तीतो छ । ‘संस्थामा तात्कालिक माओवादीका पूर्वलडाकुहरू पनि हुनुहुन्छ,’ उनले खुलस्त पारिन्, ‘उहाँहरू घर पुग्दा आफन्तविहीन, सहिदका छोराछोरीले हाम्रा बाआमा खोई ? भन्दै सोध्थे । तपाईंहरू अर्कोपटक घर आउँदा हाम्रा बाआमा पनि ल्याइदिनू है भन्थे । त्यस्तो कारुणिक अनुरोध सुनेपछि संस्थापक दाइहरूले उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको हो ।’
संस्थाको मासिक खर्च ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । ‘एकजनालाई मासिक ९ हजार खर्च लाग्छ । ९ हजारका दरले ४७ जनाको मासिक खर्च ४ लाख २३ हजार हुन्छ । कार्यालयीय र कर्मचारीसहितको खर्च जोड्दा मासिक ५ लाख रुपैयाँले पुग्दैन ।’
६ देखि १८ वर्षीय छोराछोरीले घेरिएकी उनले शैक्षिक अध्ययन अतिरिक्त निशा रोकामगर र अनुप घर्तीमगरलाई ‘ट्राभल’सम्बन्धी तालिम गराउँदै आएकी छन् । ११ कक्षामा अध्ययनरत मगरद्वयले उनीहरूकै रुचिअनुसार तालिम गरिरहेका हुन् । शैक्षिक अध्ययनसँगसँगै उनीहरूलाई सीप सिकाउन लागिपरेकी छन् ।
कसको कपडा, जुत्ता, मोजा फाटेको छ । कसलाई के चाहिएको छ ? त्यसको व्यवस्थापन उनैले गर्नुपर्छ । सबैका ममतामयी आमालाई ४७ जना छोराछोरीको नाम कण्ठ छैन ।